daryeelka shakhsi ahaaneed, shaqooyinka adeegga iyo dayactirka | Resources ka USAHello | USAHello
daryeelka shakhsi ahaaneed, shaqooyinka adeegga iyo dayactirka
Baro shaqooyinka adeegga iyo dayactirka iyo noocyo badan oo kala duwan oo ah daryeelka iyo shaqooyinka adeegga. Read ku saabsan waddooyinka mustaqbalkiisa kala duwan oo aad qaadi karto in daryeelka shakhsi ahaaneed iyo dayactirka. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada.
daryeelka shakhsi ahaaneed, shaqooyinka nadiifinta iyo dayactirka yihiin faafay warshado badan oo kala duwan. Laakiin shaqooyinka oo dhan waxay bixiyaan adeegyo muhiim ah. Shaqooyinka waxaa ka mid ah wax walba oo ka nadiifinta iyo dayactirka hantida timo iyo ilaalinta carruurta. Dad badan oo shaqo adeega of this nooc uma baahna shahaado ama waxbarasho sare. Laakiinse iyagu ma si aad u wanaagsan bixisay.
daryeelka shakhsi ahaaneed, adeegyo toos ah, shaqooyinka nadiifinta iyo dayactirka yihiin beeraha oo dhan kordhaya badan oo shaqo heli karo. Waxaa jira sababo dhowr for this:
The dadka United States waxaa sii weynaanayaa oo u baahan daryeel dheeraad ah.
Dadku waxa ay waqti dheeraad ah oo dheeraad ah iyo lacag ku jimicsiga iyo daryeelka shakhsi ahaaneed.
Dadka dakhligoodu sare diyaar u yihiin in ay bixiyaan dadka kale in ay sameeyaan howl maalmeedka ay, sida socodka eey oo shopping.
Dad badan ma rabaan in ay sameeyaan shaqooyin adeeg toos ah, sida nadiifinta iyo daryeelka dadka da'da ah ama dadka naafada ah.
Mishiinada iyo aalado si fudud looma badali karo dadka in badan oo ka mid ah shaqo, kuwaas oo.
Waa kuwee daryeelka, shaqo adeega iyo dayactirka?
Waxaa jira wadooyin badan oo aad raaci karaan duurka this koraya:
daryeelaha Animal - daryeelka xayawaanka waa mustaqbalkiisa ah la ballaariyo loogu talagalay dadka ka heshaa xoolaha.
midiidinnadiisa - midiidinnadiisa adeegtaan oo hanuuniyo dadweynaha ee tiyaatarada, goobaha madadaalada, casinos, iyo firdows dheeldheel.
Daryeelka - baahida loo qabo shaqaalaha daryeelka caruurta ee xarumaha dharaartii, dugsiyada iyo guryaha gaarka loo leeyahay waxaa sii kordhaya.
cosmetologist - daryeelka maqaarka dadka iyo qurbaan dhammaan noocyada daawaynta quruxduna waa warshadaha sii kordhaya.
Fitness iyo madadaalada - macallimiinta taam iyo madaxda madadaalada labaduba beeraha sii kordhaysa ee shaqada.
timaha stylist - jarida iyo Attam timaha u baahan yahay tababar iyo gobolka-by-state shahaado.
Guriga ka ahaa iyo naagihii addoommahooda - dadka oofiyo nadiifinta iyo hawlo kale oo qoyska ah ee guryaha gaarka loo leeyahay iyo hotels inta badan waxay leeyihiin inay shaqeeyaan saacado saacaado.
Janitors - dadka gudanaya nadiifinta culus iyo dayactirka dhismayaasha waaweyn. Tani waa shaqo ay jiraan tiro sii kordhaysa ee shaqooyinka.
Landscapers iyo beeralayda - ka baxsan shaqada kalimo iyo abuurista yards iyo meelaha waaweyn beerfalay, sida beeraha dadweynaha iyo goobaha dhismayaasha hareeraha waaweyn.
Manicurist / pedicurist - shaqaalaha ciddiyaha xirfad u baahan doonaa tababar iyo shahaado qaar ka mid ah.
shaqaalaha daryeelka shakhsi ahaaneed (daryeelaha) - ilaalinta dadka u baahan gargaar jireed, sida dadka waayeelka ah. Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu dhaqsiyaha badan u kordhaya.
Horjoogaha - fillaysii badan, Kooxaha muuqaalka dhirta iyo dayactirka leeyihiin kormeerayaasha ama maareeyayaasha kuwaas oo isugu duwo oo lala socdo shaqada.
Ma adeegga iyo dayactirka shaqooyinka shakhsi xaq ii?
Shaqooyinka Kuwan waxaa aad u kala duwan, sidaas mid ka mid ah beeraha badan waxaa laga yaabaa inuu taam khayr idiin ah a. Waxaad ka reading liiska arki doonaa kor ku xusan in aan shaqo miiska. Inta badan oo iyaga ka mid habboon lahaa qof oo aan rabin in ay xafiis ama waqti badan ku qaataan on computer ah. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxay u baahan yihiin shaqo badan jirka, waardiye sida, ninkii beerta ka shaqaynayay, iyo macalin.
daryeelka shakhsi ahaaneed iyo daryeelka shaqo maaha kuwo si jirka. Waxay ku habboon dadka sida daryeelidda dadka kale iyo kuwa bukaan-socodka iyo nooca. Shaqooyinka midiidinka iyo xafiiska qaar ka mid ah shaqooyinka nadiifinta waa wanaagsan ee ardayda ama dadka kale ee u baahan in shaqada fiidkii. timaha Attam, adeegyada beauty, iyo adeegyada xayawaanka wanaagsan ee qof kasta oo raba in ay ganacsi u gaar noqon lahaa.
Daawo milkiilaha dukaan is qurxin ah ee Buffalo, New York, iyo qaxootiga kale ee hore ee ay ka hadlaan bilaabo ganacsiyo iyaga u gaar ah
Weydii ururada bulshada
Haddii aad tahay qaxooti, waxaad bilaabi kartaa adoo waydiinaya dejinta ayaa kuu saabsan barnaamijka shaqo ay. Qaar badan oo ururada dejinta iyo soo galootiga ah ee xiriirka la leh loo shaqeeyayaasha deegaanka, sida hotels. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxay bixiyaan barnaamijyada tababarka shaqo aad u. Raadi ururada bulshada aad la FindHello.
adeegga Personal, shaqooyinka nadiifinta iyo dayactirka uma baahna wax tababar ah. Tusaale ahaan, nadiifiya hotel ama tiyaatarka midiidinka cusub la tababari doonaa shaqada by kormeeraha ama coworker. Read ku saabsan hotel a in aaminsan shaqaalaynta qaxootiga waa u dhaqaaqo smart.
shaqooyinka kale ee adeegga iyo dayactirka u baahan doonaa tababar qaar ka mid ah. Kuleejooyinka bulshada waxay bixiyaan koorsooyin dhismaha iyo habka dayactirka waa u faa'iido badan ee janitors. Waxay sidoo kale bixiyaan koorsooyin ku muuqaalka, timo iyo daryeelka maqaarka. Raadi college beesha kuu dhow.
Timaha iyo tababarka beauty
Waxaa jira dugsiyada ayaa sidoo kale dad badan oo timaha iyo qurux gaar ah. Raadi mid la ansixiyo Association American ee Qurxin Dugsiyada. ciddiyaha, timaha oo quruxduna xirfadlayaasha waa in shati in ay gobolka.
Waad awoodaa heli shuruudaha ruqsad-siinta ee gobolka oo aad wax dheeraad ah oo ku saabsan baran kartaa Waddooyinkiisa mustaqbalkiisa in timaha iyo qurux.
Uma baahnid ruqsad si ay u daryeelaan carruurta guriga haddii aad bilowdo ganacsi xannaanada carruurta. Laakiin dabcan ah online iyo aqoonsiga kaa caawin kara inaad hesho shaqo. Ururka Laanqayrta Cas ayaa tababar ah daryeelka caruurta sare koorsada aad samayn karto online. Waxaad heli doontaa shahaado. Baro Ururka Laanqayrta Cas ee siyaadinay tababar daryeelka online.
Haddii aanu jirin urur si ay kuu caawiyaan, waxaad bilaabi kartaa by codsanaya shaqooyin halkaas oo shaqaaluhu waa in baahida sare. xarumaha shaqada dowladda waa lacag la'aan. Waxay bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Waxay kugu xidhi karaan tababarka iyo waxbarashada shaqada. Aad u ogaato xarunta shaqada ee kuugu dhow.